Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Uruguayan Ronald Araujo Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Ihe omuma anyi nke Ronald Araujo na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ndu, ezinulo, ndi nne na nna, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, ndu ndu, ndu onwe onye na uru ya.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke ndị egwuregwu bọọlụ Uruguayan nke sitere na Rivera. LifeBogger malitere site na nwata, rue mgbe amaara ya Lionel Messi si Barcelona. Iji mee ka uto nke onwe gị na-atọ ụtọ na ọdịdị nke Ronald Araujo's Bio, nke a bụ nchịkọta nchịkọta nke ndụ ya.
Akụkọ banyere Ronald Araujo.
Ee, onye ọ bụla maara na Barca anaghị eso onye ọkpụkpọ egwuregwu ogologo oge. Ọ bụghị ihe ijuanya Ndi Catalan bu n’obi ịgbatị nkwekọrịta Ronald Araujo rue June 2026. Ọ na-egosi na ọ bụghị onye na-agbachitere nkịtị.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu nyere ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi, anyị ghọtara na ọ bụ mmadụ ole na ole tụlere ụdị akụkọ ndụ ya. Anyị akwadebela ya, maka ịhụnanya maka egwuregwu ahụ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Ronald Araujo Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, onye na-agbachitere na-aza aha zuru ezu; Ronald Federico Araujo da Silva. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị hụrụ egwuregwu n'anya maara aha ya "Buffalo". A mụrụ ya na 7th ụbọchị Machị 1999 na nne na nna Uruguayan na obodo oke obodo Rivera.
Onye na-azụ azụ bụ ọkpara n’ime ụmụ atọ amụrụ site na njikọ dị n’etiti nna ya na mama ya. Mgbe ọ na-ewere ịdị umeala n'obi nna ya, Ronald ketara ọchị ọchị nke nne ya.
Ga-ahụ ihu Ronald Araújo na Nna ya. Nne ya na-esi n'ọnụ site na ntị ruo na ntị enweghị ọnụ.
Dịka nwatakịrị, Ronald na-eto eto jiri oge ya niile na nkasi obi nke nne na nna ya. Ya na ụmụnne ya na nne ha nọrọ ka nna ha ji ọrụ na-ebugharị ha. Dị ka nwa mbụ nke nne na nna ya, ọ chere obere oge - ruo mgbe a mụrụ nwanne ya nwoke, bụ Maikel.
Ezigbo Ezinụlọ Ronald Araujo:
Ọ bụghị ndị ọ bụla na-eme egwuregwu na-agọzi ndị nne na nna na-arụsi ọrụ ike dị ka nke azụ na azụ. Ọ bụ ezie na nna Araujo na-agbasi mbọ ike iji gboo mkpa ezinụlọ ya, mama ya ahapụghị. Ọ rere achịcha eghere eghe na Huracan (ụlọ akwụkwọ mmuta nke obodo) iji kwado mbọ nke di ya.
Ezinụlọ Ronald Araujo:
Site na ọganiihu ọrụ ya, Uruguay nwere mpako ịchọpụta na ọ bụ nke ha. Dị ka Wikipedia na-ekwu, aha nna ya ma ọ bụ aha nna ya bụ Araújo mgbe aha ezinụlọ ya nke abụọ ma ọ bụ nne bụ da Silva.
Dika ozo, obodo ya - na mpaghara Mandubi nke Rivera - di na kilomita ole na ole site na ebe amuru Luis Suarez, nwoke nwoke o weere ka nnukwu nwanne. Dị ka nnyocha si kwuo, Araujo enwetawo agbụrụ sitere na ezinụlọ ezinụlọ Brazil site na nna nna ya.
Rivera keere òkè na Santana do Livramento, obodo dị na Brazil.
Mgbe Ronald dị afọ isii, ọ gụrụ akwụkwọ n'ihu ọha nke bụ n'efu. N'ịbụ onye nwere agụụ na-arịwanye elu maka football na ọchịchọ na-agụsi ike ịghọ onye pro, ọ leghaara ọmụmụ ihe agụmakwụkwọ anya. Na mbu, enwere onyonyo kwesiri ekwesiri ma ihe ochicho nke football gburu ya.
Ronald Araujo Akụkọ Na-adịghị Agbanwe Eziokwu:
Akara aka na onye agbachitere ahụ nabatara ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ebe nne ya rere achịcha eghere eghe - nke a na-akpọkwa donuts. Ihe ngosi nke umuaka nwere obi uto site na ngosi nke umuaka na ulo akwukwo ya. Nke a hụrụ ya ka ọ na-achọ ka di ya kwado ka nwa ya nwoke debanye aha ya na agụmakwụkwọ.
Mgbe ọ gụsịrị ahịa ya, mama Ronald gbagara n'ụlọ ka ya na papa onye na-agbachitere kwurịta banyere ịdenye aha ya na Huracan. Obi dị m ụtọ na ndị nne na nna Araujo kwetara na ha ga-enyere ya aka ịkwalite onyinye bọọlụ ya ebe ahụ. Ha nwere nwa ha nwoke ka ọ sonyere na klọb nke obodo ya; Huracan de Rivera, ebe nne ya rere achicha eghere eghe.
Njem Ronald dị ka nke a Mascherano sitere n'ike mmụọ nsọ akụkọ akụkọ, Carles Puyol na ọtụtụ ndị na-agbachitere ndị ọzọ bụ ndị malitere dị ka ịga n'ihu. Maka ọtụtụ ndị maara ya, enweghị obi abụọ ọ bụla na ọ gaghị enwe ihe ịga nke ọma n'ọdịnihu. Nkwupụta ndị a bịara ka ọ na-eduga agụmakwụkwọ ya iji merie nnukwu ihe egwu.
Foto nwata bụ nke Ronald Araujo ka ọ na-eme mmeri na-asọ asọ.
Ndụ Na-adịghị Mma Oge Ndụ:
Tupu ọ ghọọ onye na-eto eto, Ronald Araujo kpebisiri ike ịga maka ọnwụnwa ka ukwuu na isi obodo ya bụ Montevideo. Gị, mgbalị ịbanye (agadi 9) na Atlético Peñarol dara. N'enwe obi mgbawa, nwata nwoke dara ogbenye laghachiri n'obodo ezinaụlọ ya na Rivera.
Mgbe Ronald Araujo laghachiri n'ụlọ, ọ gara n'ihu na-egwuri egwu maka ndị otu mpaghara. N'ịbụ onye na-enwe nkụda mmụọ na obere ogo, nwata ahụ n'oge ahụ, chere na ọ bụ naanị ịkpọ oku ka ọ ghara ịbụ ndị na-agba ọsọ.
Ruo afọ iri sochirinụ, nnọgidesi ike hụrụ ya ka ọ na-aga n'ihu n'usoro egwuregwu ya. Araujo gbanwere na mbuso agha na etiti. Nkwekorita nke ighapu ozo huru ya ka o na-agaghachi isi obodo Uruguay maka ule - oge a ka ya na Atlético Rentistas (na 2016) nwee obi uto.
Ronald Araujo Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ụlọ ọhụrụ ya, Ronald zutere Sergio Cabrera - onye na-ahụ maka nna nke nyere ya ọkachamara izizi. Onye nchịkwa ahụ hụrụ na 16 afọ nwere ogo na ike maka onye na-agbachitere ya. N'oge na-adịghị anya, o mere ka ọ chọta nkasi obi dị ka etiti azụ.
Nwanyị na-agbachitere Araújo nwere mmasị Club Atlético Boston Osimiri onye bịanyere aka na ya na 28th ụbọchị nke July 2017. youngghọ onye ntorobịa kachasị mma na otu egwuregwu bọọlụ kachasị elu na Uruguay dọtara ndị na-agba FC FC Barcelona. Ndị ọbịa si Europe nwere okwukwe dị ukwuu na ikike ya wee mee ka ọ bịanye aka na ndị Spain ahụ.
Inwe obi ike ịhapụ nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya n'azụ maka Europe bụ ihe kachasị sie ike o chere. N'ihi challanges ndị dị n'ihu, Ronald nwere obi ike ka ọ malitere ilekwasị anya na ịkwado ebe ya na ibi ndụ nke ọma na Barcelona B n'akụkụ.
N'oge na-adịghị anya, ọ ghọrọ akụ na ụba dị oke ọnụ nke Blaugrana, ihe ngosi nke welitere njedebe nkwụsị ya nke million 100 nde na Barca B na € 200 ma ọ bụrụ na ọ ruru ndị otu mbụ. Na Samuel Umtiti na-aghọ onye a na-apụghị ịtụkwasị obi, klọb ahụ malitere ịnụ ụtọ Araujo dị ka ihe na-esote isi na agbachitere Barcelona.
Ronald Araujo's Bio - Akụkọ nke Ọma:
N'ụzọ dị mwute, mmalite nke otu ndị isi otu Barcelona na Ọktoba 2020 malitere na ihe ndozi. Naanị minit 13 ka ọ dochiri Jean-Clair Todibo na egwuregwu megide Sevilla, Araujo zigara ya ka ọ ghara ịlụ ọgụ Javier Hernandez.
Site n'inwe ezi uche, kpakpando ndị Uruguay ekweghị ka mmalite nke mmalite ya jinx ọrụ ya niile. Naanị ọnwa ole na ole ka e mesịrị, Ronald Koeman nyere ya nọmba 4 ahụ ka ọ na-esonyere ndị isi na Barcelona maka oge 2020-21.
Site na iji ohere a, Araujo maara na ọ bụ ugbu a ma ọ bụ na ọ gaghị enwe mmetụta dị mma na ìgwè ọhụrụ ya. Ka m na-etinye aka n'ịmepụta Biography a, nwa nwoke ahụ nwere nne na nna dara ogbenye, onye mama ya rere achịcha eghe iji nye ezinụlọ ya nri ka meriri Goal Jenụwarị 2021 nke ọnwa.
Hụ iku nke nyeere Ronald Araújo aka inweta mmeri nke La Liga nke ọnwa.
Enweghị ajụjụ, Araujo nke guzo na 6'3 dị elu bụ onye nchebe dị egwu. Na pitch, ọnụnọ ọchịchị ya bụ ihe a ga-ahụ. N'ezie, Uruguay gọziri agọzi ma nwee onye ga-anọchi ya Diego Godin. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ronald Araujo ọ nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye ka ọ bụrụ:
Na mbu, onye na-agbachitere Uruguayan dọọrọ uche ndị Fans banyere otu nwanyị o bipụtara na mgbasa ozi mmekọrịta aha ya bụ Abi Oliivera. Onye ọ bụla chere na ha bụ ndị hụrụ ha n'anya. Ka oge na-aga, nchọpụta ọhụụ gosiri Abi Oliivera bụ akụkụ nke ezinụlọ ya. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ụlọ akwụkwọ chere na ọ bụ enyi nwanyị Ronald Araujo.
Ọnye na-bụ Abi Oliivera ka Ronald Araujo?
Nyochaa ọnọdụ ahụ - ka, na mmalite nke 2021, anyị hụrụ na enweghị foto agbamakwụkwọ. Otu ihe bịara doo anya. Eziokwu ahụ bụ na ọ na-enwe ọ pleasureụ n'igosi WAG ọhụrụ ya. Site na ihe anyị nwere ike ịgwa, Ronald nwere nwunye na-achọ ịlụ. Ọ bụ ezigbo mma mma nke mara mma. Paragon nke kachasị mma zuru oke maka nwoke ya.
Zute ịhụnanya nke ndụ ya.
Anyị na-achọpụta na enyi nwanyị Ronald Araujo nwere mmasị yiri nke WAG nke Federico Valverde. Iji kọwaa, ha abụọ nwere mmasị ịkọ akụkọ banyere ndụ ịhụnanya ha na Instagram. Akụkọ mpaghara nwekwara na Araujo mere ka ndị mụrụ ya mara enyi ya nwanyị.
Ọ bụ enyi nwanyị Ronald Araujo na nwunye ka ọ bụrụ.
Ikpe ikpe site na ụzọ ndị hụrụ n'anya na-egosi igosipụta ngosipụta dị ukwuu nke ịhụnanya, otu ihe doro anya. Ohere nke 99% na ya gabu nwunye ya na nne nke umu ya.
Ronald Araujo Ndụ Nke Onwe:
Kedu ka ị maara onye Uruguayan nke ọma na nsogbu ya na pitch? Nke mbụ, ọ bụ nwanyị dị nro nke na-ekwe ka ọnụ ọchị ya gosipụta ụdị omume ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, ịdị umeala n'obi Araujo na-ebute aha ya ụzọ. Karịsịa, ọ bụ onye na-enwe mmasị ikwu okwu ije na okike.
N'ihi njirimara onwe ya, a na-amanye ndị mgbasa ozi ịkpọ ya dị ka onye dị umeala n'obi - onye Madrid na-enweghị ike izu ohi. Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na ọ bịaala bọọlụ n'ihi na ọ malitere mmalite dị ala. Eziokwu bụ, Ronald anaghị echefu Rivera, ebe ezinụlọ ya si.
Ndụ Ronald Araujo:
Site na ụgwọ ọnwa ya nke € 2.9 (2021 Stats), Buffalo azụrụla onwe ya ụgbọ ala mara mma na ụlọ dị oke ọnụ. Ka m na ede Bio a, Araujo ya na enyi ya nwanyi bi na be ya.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-atọ ọchị mgbe ya na nwunye ya ga-eme n'ọdịnihu. Ọzọkwa, atụmatụ Net Net nke € 1 ga-abawanye ka ọ na-aga n'ihu maka atụmatụ maka otu klọb kacha mma na Spain.
Ndụ Ronald Araujo Ezinụlọ:
O nweghị okwu kọwaara ha ihe ọ na-eche, oge ọ bụla ọ kpọọrọ ezinụlọ ya dum gaa n’ọdọ mmiri ahụ iji mee ka obi jụrụ ha n’ehihie ahụ. Dị ka Lucas Torreira, Araujo ji nne na nna ya na ụmụnne ya kpọrọ ihe karịa ihe ọ bụla na ndụ. N'akụkụ a, anyị ga-ewetara gị ozi gbasara eziokwu banyere onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya dị umeala n'obi.
Banyere mama Ronald Araujo:
Womenmụ nwanyị siri ike bụ ọrụ dị mkpa maka iwu ụlọ siri ike, mama mama Araujo sokwa. Isingzụ ụmụ nwoke atọ na ịrụ ọrụ n’otu oge adịghịrị ya mfe. Ọ bụ ụdị nke na-ebute ọdịnihu nke ụmụ ya tupu aha ya. Cheta, nne Ronald Araujo rere achịcha eghere eghe iji kwado ezinụlọ ya.
Ọbụna n'oge ọ bụ nwata, nne ya nwere amamihe wee nweta aro ka onye na-eme ihe sonyere ụlọ akwụkwọ ntorobịa. Obi dị m ụtọ na echiche ya emeela ka nwa ya nwoke bụrụ nde mmadụ.
Banyere Ronald Araujo Nna:
Site na otuto nwa ya na-abawanye kwa ụbọchị, nnukwu nna ahọrọla ndụ nke onye isi nchịkwa. N'ezie, ọ bụ ihe o kwesịrị ime. Site n'ịdị umeala n'obi ya, nna Araujo akwadowo nwa ya nwoke, ma ego ma omume.
Ọtụtụ mgbe, ọ na-agba nwa ya nwoke ume ibute Chineke ụzọ tupu ọrụ ọ bụla ọzọ. Ikekwe echiche okpukpe nke onye na-agbachitere ya bụ ngosipụta nke ihe niile ọ mụtara n'aka nna ya.
Banyere ụmụnne Ronald Araujo:
Inwe ụmụnne nwoke abụọ ya na ha na-anọ ezumike ezumike na-eme ka ndụ ya dị ịtụnanya. N'etiti ụmụnne ya, naanị otu (Maikela) pụtara dị ka kpakpando na-esote n'ezinụlọ. Ka m na-ede Bio a, Maikela na-eme klọb na klọb dị na mpaghara.
Banyere ndị Ronald Araujo:
Kemgbe ọ ghọrọ onye ama ama, ndị mgbasa ozi emebeghị ka ha juo ase na nne na nna ya ochie dị. Otú ọ dị, anyị chọpụtara na nne nne ya webatara nwatakịrị a ma ama na Uruguayan - Bitter Mate.
Ronald Araujo Eziokwu Eziokwu:
Iji kechie akwụkwọ akụkọ ndụ anyị nke Akụkọ Emerging Center-Azụ ebe a ụfọdụ amaghị ihe eziokwu na ị maghị nke ahụ ga - enyere gị aka inweta ihe ọmụma zuru oke banyere Biography.
Kwa Afọ € 2,883,305
kwa ọnwa € 240,275
Kwa Izu € 55,363
Kwa .bọchị € 7,909
Kwa elekere € 330
Kwa Nkeji € 5.5
Nnyocha na-egosi na otu nwa amaala Uruguayan ga-arụ ọrụ afọ 7 iji nweta ihe onye na-azụ ahịa na-enweta n'ime otu ọnwa.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Araujo's Bio, nka bu ihe o nwetara.
Eziokwu nke 2: Religion:
Na usoro ọ bụla onye na-eme ihe, ọ na-ahụ na ọ gụnyere Chineke. Ikwu okwu banyere onye n'egwuregwu na okwukwe na Araujo ga-anọ na mgbe niile. Ọ na-akwado iji nye Chineke otuto maka goolu ọ bụla o gbatara. Ikekwe ọ masịrị ya ịgbaso nzọụkwụ nke Edison Cavani mgbe ọ bịara n'okwu banyere okwukwe Ndị Kraịst ya.
eziokwu # 3: FIFA FIFA stats:
Araujo ka nwere otutu uzo o gha agha tupu o nwezuo ike ya Diego Godin. Nchịkọta ya n'ozuzu abụghị ihe ọ bụla iji dee n'ụlọ ebe ọ ga-abụ na ọ ga-abụ na ọ ga-eme nke ọma Lucas Torreira. Nke a bụ ihe ịma aka nye Ronald iji gosipụta na FIFA ezighi ezi.
N'ime oge, Araujo egosila na nrọ anaghị eme eme site na anwansi. Kama, ọ na-achọ ọsụsọ, mkpebi siri ike, na ịrụsi ọrụ ike iji nweta ya. Ka a sịkwa ihe mere o ji enye ike ya niile na ọzụzụ na egwuregwu.
Anyị na-aja obi ike nke nne na nna ya na-elekọta ọrụ ọrụ ya site na nwata ruo ụbọchị. Ọzọkwa, eziokwu ahụ bụ otu n'ime ụmụnne ya nwoke na-ejegharị na nrọ yiri ya bụ nnukwu mmeri nye ezinụlọ ya. Anyị nwere olile anya na ha ga-enweta oke dị ka Buffalo.
Daalụ maka ịgụ akụkọ ndụ Biography nke etiti na-apụta. Jiri obiọma kọọrọ anyị echiche gị banyere ya na ngalaba nkọwa. N'otu aka ahụ, site na nchịkọta nke Bio ya na tebụl wiki.
Aha n'uju: Ronald Federico Araujo da Silva
aha otutu: Buffalo
Age: 21 afọ na ọnwa 11.
Ebe amụrụ onye: Rivera, Uruguay
Ụmụnne: Brothersmụnna nwoke abụọ (Maikela Araujo)
Ezigbo Net: Million 1 million (2021 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: Million 2.9 million (2021 Ọnọdụ)
Bọchị agbanwee: Disemba 8, 2020